← أي مستقبل للأمة في زمن الاحتكارات 1/2
Dumarka iyo Maamulka: Xukunka Shareecada Islaamka →
Qormadani waxa ay daba socotaa tii Isniintii hore. Qaybtan, Dr. Cabdalla waxa uu si gaar ah ugu canaanayaa madaxda Khaliijka iyo waxgaradkoodaba dabadhilifnimada iyo karaama-dhaca ay cigaalka iyo dhaldhalaalka Jabbaan kaga dhuuntaan. Waxa uu ka qarracan yahay sida ay Liz Cheney oo kale ugu amarkutaaglaynayso carradii soo saartay Cumar binu Khaddaab iyo Cumar binu Cabdulcasiis. Qormadan waxa uu ku dheeraaday arrimaha Khaliijka sidaa darteed wax badan ayaan iska dhaafay. Dhinaca kale, waxa uu qormadan qoray kacdoonnada carabta hortood, waxaanad arki doontaa meelo badan oo uu bulshada kacdoon ku boorrinayo. Dr. Cabdalla waxa uu ka tirsan yahay dugsiga ilma Qudub (Sayid iyo Maxamed). Haddaad qoraalladiisa afcarbeedka ah akhrido waxa aad xasuusanaysaa buugaagta ay ka midka yihiin: Waaqicunal mucaasir, jaahiliyatul qarnil cishriin, macrakatu at-taqaaliid, macaalim fi ad-dariiq, mafaahiimun yanbaqii an tusaxax ikm.
Waddada afraad: Edegaynta aqoonta iyo warbaahinta